February 24, 2012 - Written by
Afgooye: Wararka naga soo gaaray magaalada Afgooye ayaa sheegay in diyaarado laga leeyahay reer Galbeedka in ay duqeyn la bartilmaamsadeen gaari marayey degaanka Nr 60 ee Gobolka Sh Hoose. diyaaradaha ayaa la sheegayaa in ay ahaayeen diyaaradaha reer galbeedka ah ee ku sugan xeebaha dalka Soomaaliya waxaan ay duqeyn ku burburiyeen 2 gaari oo ah nooca Ruuneedka ah.
Wararka ilaa saaka ka soo baxay duqeynta cid lala bartilmaamsaday ayaa dadka degaanka waxaa ay sheegayaan in labada gaari ee la duqeeyey ay wateen saraakil iyo ciidamo ka tirsan ururka Al-shabaab, weerarka duqeynta ayaa la sheegayaa in ay ku dhinteen ilaa 6 qof oo aan ilaa hadda si cad loo shaacin magacyadooda iyo masuuliyadda ay ka hayeen ururka Al-shabaab.
Warar fara badan ayaa ka soo baxay dadka lagu dilay weerarka waxaan dadka degaanku ay saxaafada u sheegeen in duqeynta lagu dilay hogaamiyeyo u dhashay dalka Kenya oo magaciisa lagu sheegay Sheekh Abuukar Xaaji Ahmad oo ka dhinac dagaalamayey ururka Al-shabaab xili uu ku sii jeeday deegaanka Gandarshe ee gobolka Sh.hoose. Dadweynaha qaar ayaa saxaafada u sheegay in weerarka duqeynta lagu dilay Sh. Zakar oo ah hogaamiye ka tirsanaa ururka Al-shabaab.
Ilaa hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay hogaanka ururka Al-shabaab oo ku aadan duqeynta dhacday iyo faahfaahin ku saabsan cidda lagu dilay weerarka , Duqeynta xalay ka dhacday degaanka Nr-60 ayaa ku soo beegmaysa xili shalay shir ka dhacay magaalada London la go,aamiyey in weeraro dhinac cirka lala bartilmaamsado hogaamiyaasha iyo fariisamaha uruka Al-Qaacid uu ku leeyahay gudaha dalka Soomaaliya.